Ezra 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
8 Ireto avy ny lohan’ireo fianakaviambe+ sy ireo voasoratra tao amin’ny tetirazana,+ izay niara-niakatra tamiko avy tany Babylona, tamin’ny andro nanjakan’i Artaksersesy+ Mpanjaka: 2 i Gersoma avy amin’ny taranak’i Finehasa;+ i Daniela+ avy amin’ny taranak’i Itamara;+ i Hatosy avy amin’ny taranak’i Davida;+ 3 i Zakaria avy amin’ny taranak’i Sekania sy avy amin’ny taranak’i Parosy,+ ary nisy dimampolo amby zato lahy voasoratra anarana niaraka taminy; 4 i Eliho-enay zanak’i Zerahia no avy amin’ny taranak’i Pahata-moaba,+ ary nisy roanjato lahy niaraka taminy; 5 i Sekania zanak’i Jahaziela no avy amin’ny taranak’i Zato,+ ary nisy telonjato lahy niaraka taminy; 6 i Ebeda zanak’i Jonatana no avy amin’ny taranak’i Adina,+ ary nisy dimampolo lahy niaraka taminy; 7 i Jesaia zanak’i Atalia no avy amin’ny taranak’i Elama,+ ary nisy fitopolo lahy niaraka taminy; 8 i Zebadia zanak’i Mikaela no avy amin’ny taranak’i Sefatia,+ ary nisy valopolo lahy niaraka taminy; 9 i Obadia zanak’i Jehiela no avy amin’ny taranak’i Joaba, ary nisy valo ambin’ny folo sy roanjato lahy niaraka taminy; 10 i Selomita zanak’i Josifia no avy amin’ny taranak’i Bany,+ ary nisy enimpolo amby zato lahy niaraka taminy; 11 i Zakaria zanak’i Bebay no avy amin’ny taranak’i Bebay,+ ary nisy valo amby roapolo lahy niaraka taminy; 12 i Johanana zanak’i Hakatana no avy amin’ny taranak’i Azgada,+ ary nisy folo amby zato lahy niaraka taminy; 13 Elifeleta sy Jeiela ary Semaia no anaran’ireo avy amin’ny taranak’i Adonikama,+ ka ireo no farany amin’io taranaka io, ary nisy enimpolo lahy niaraka tamin’izy ireo; 14 i Otahy sy Zaboda no avy amin’ny taranak’i Bigvay,+ ary nisy fitopolo lahy niaraka tamin’izy ireo. 15 Ary novoriko teo amin’ilay renirano+ mankany Ahava+ izy ireo. Dia nitoby telo andro teo izahay mba handinihako tsara ny vahoaka+ sy ny mpisorona,+ nefa tsy nahita na dia Levita+ iray aza aho. 16 Koa nampanantsoiko i Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria ary Mesolama izay samy lohandohany, ary koa i Joariba sy Elnatana izay samy mpampianatra.+ 17 Dia nomeko baiko izy ireo ho any amin’i Ido, ilay lohandohany tao Kasifia, ka nambarako tamin’izy ireo izay teny+ holazaina amin’i Ido sy ireo Netinima+ rahalahiny tao Kasifia, mba hitondrany olona any aminay hanompo+ ao an-tranon’Andriamanitray. 18 Araka ny soa nataon’ny tanan’Andriamanitray+ taminay, dia nentin’izy ireo tany aminay ny lehilahy malina+ iray atao hoe Serebia,+ avy amin’ny taranak’i Maly+ zafikelin’i Levy,+ zanak’i Israely. Nentin’izy ireo koa ny zanak’i Serebia sy ny rahalahiny, valo ambin’ny folo lahy; 19 ary koa i Hasabia sy Jesaia avy amin’ny taranak’i Merary,+ sy ny rahalahiny ary ny zanak’izy ireo, roapolo lahy. 20 Ary nisy roapolo sy roanjato ny Netinima, avy tamin’ireo Netinima izay nomen’i Davida sy ny andriana mba hanompo ny Levita. Ary samy voatonona anarana izy ireo. 21 Dia nanao antso avo aho hoe hisy fifadian-kanina teo amin’ny reniranon’i Ahava, mba hahafahanay hanetry tena+ teo anatrehan’Andriamanitray, ka hangatahana azy hitarika ny dianay+ miaraka amin’ny zanakay madinika+ sy ny fanananay rehetra. 22 Fa nahamenatra ahy ny hangataka tafika+ sy mpitaingin-tsoavaly+ tamin’ny mpanjaka, mba hiaro anay tamin’ny fahavalo teny an-dalana. Efa nilaza tamin’ny mpanjaka mantsy izahay hoe: “Ny tanan’Andriamanitray+ dia momba an’izay rehetra mitady azy sy te hanao ny tsara,+ fa ny heriny sy ny fahatezerany+ kosa mihatra amin’izay rehetra mahafoy azy.”+ 23 Koa nifady hanina+ sy nangataka+ momba izany tamin’Andriamanitray izahay, mba hihainoany ny fitalahoanay.+ 24 Ary nisy roa ambin’ny folo lahy natokako avy tamin’ireo lehiben’ny mpisorona, dia i Serebia+ sy Hasabia+ ary ny folo tamin’ny rahalahin’izy ireo. 25 Dia nolanjaiko mba homena azy ireo ny volafotsy sy ny volamena ary ny fitaovana,+ izay fanomezana ho an’ny tranon’Andriamanitray avy tamin’ny mpanjaka+ sy ny mpanolo-tsainy+ sy ny andrianany ary ny Israelita+ rehetra hitanay tao amin’ilay faritra. 26 Koa nolanjaiko sy natolotro azy ny talenta* volafotsy+ dimampolo ary koa ny talenta eninjato, sy fitaovana volafotsy zato izay nitentina talenta roa, sy talenta volamena zato, 27 sy vilia baolina kely volamena roapolo izay nitentina darìka arivo, ary fitaovana roa vita amin’ny varahina tena tsara, izay mena mamirapiratra, sady sarobidy toy ny volamena. 28 Dia hoy aho tamin’izy ireo: “Masina+ eo anatrehan’i Jehovah ianareo, ary masina koa ireo fitaovana+ ireo. Ary fanatitra an-tsitrapo ho an’i Jehovah Andriamanitry ny razanareo ireo volafotsy sy volamena ireo. 29 Koa aoka ianareo ho mailo sy hitandrina tsara, mandra-pandanjanareo+ izany ao amin’ny efitra fisakafoana+ ao an-tranon’i Jehovah, eo anatrehan’ireo lehiben’ny mpisorona sy ny Levita ary ireo andrianan’ny Israely any Jerosalema.” 30 Ary noraisin’ny mpisorona sy ny Levita ireo volafotsy sy volamena ary fitaovana voalanja ireo, mba hoentina any Jerosalema, any an-tranon’Andriamanitray.+ 31 Dia niala teo amin’ny reniranon’i Ahava+ izahay tamin’ny faharoa ambin’ny folon’ny volana voalohany,+ mba hankany Jerosalema. Ary nomba anay ny tanan’Andriamanitray ka namonjy+ anay teo am-pelatanan’ny fahavalo sy tamin’izay niafina hanafika anay teny an-dalana. 32 Koa tonga tany Jerosalema+ izahay ary nijanona telo andro tao. 33 Ary tamin’ny andro fahefatra, dia nolanjainay tao an-tranon’Andriamanitray ny volafotsy sy ny volamena+ ary ny fitaovana,+ ka natolotray an’i Meremota+ mpisorona zanak’i Oria, sy Eleazara zanak’i Finehasa, ary ny Levita niaraka tamin’izy ireo, dia i Jozabada+ zanak’i Jesoa sy Noadia zanak’i Binoy.+ 34 Eny, nolanjainay sy natolotray ny zava-drehetra, araka ny isany sy ny lanjany. Dia nosoratana ny lanjan’ireo rehetra ireo tamin’izay. 35 Ary nanolotra sorona dorana+ ho an’Andriamanitry ny Israely ireo nivoaka avy tamin’ny fahababoana, izay avy any an-tsesitany,+ ka ireto avy no natolony: Ombilahy+ roa ambin’ny folo ho an’ny Israely rehetra, ondrilahy+ enina amby sivifolo, ondrilahy kely fito amby fitopolo, ary osilahy+ roa ambin’ny folo ho fanatitra noho ny ota. Natao fanatitra dorana ho an’i Jehovah avokoa izany. 36 Dia nomenay an’ireo lehibem-paritany+ notendren’ny mpanjaka, sy ny governora+ atỳ ampitan’ny Renirano+ ny lalàn’ny+ mpanjaka, ka nanome fanampiana ho an’ny vahoaka+ sy ny tranon’Andriamanitra izy ireo.
^ 1 talenta = 34,2 kg.